ईश्वरसित कुराकानी गर्नुहोस्
ईश्वरसित घनिष्ठ हुन तपाईं के गर्न सक्नुहुन्छ? ईश्वरको साथी बन्न चाल्नुपर्ने निम्न कदमहरूबारे हामीले छलफल गऱ्यौं:
१. ईश्वरको नाम यहोवा हो भनेर जान्नुहोस् र त्यो नाम प्रयोग गर्नुहोस्
२. प्रार्थना गरेर अनि ईश्वरको वचन बाइबल पढेर उहाँसित नियमित रूपमा कुराकानी गर्नुहोस्
३. यहोवालाई खुसी तुल्याउने कामहरू गरिरहनुहोस्
ईश्वरको नाम प्रयोग गरेर, उहाँलाई प्रार्थना गरेर, उहाँको वचन अध्ययन गरेर अनि उहाँलाई खुसी तुल्याउने काम गरेर उहाँसित घनिष्ठ हुनुहोस्
के तपाईंले पनि ईश्वरसित घनिष्ठ हुन यी कदमहरू चालिसक्नुभयो? यीमध्ये कुनै क्षेत्रमा आफूले अझै सुधार गर्नुपर्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्यो कि? हो, ईश्वरको साथी बन्न हामीले कडा प्रयास गर्नुपर्छ। तर त्यस्तो प्रयास गर्दा नतिजा कस्तो हुन्छ, विचार गर्नुहोस् त!
अमेरिकाकी जेनिफर यसो भन्छिन्‌: “ईश्वरसित घनिष्ठ हुन हामीले गरेको कुनै पनि प्रयास खेर जाँदैन। ईश्वरको साथी हुँदा हामीले थुप्रै आशिष्‌ पाउँछौं। जस्तै: उहाँमाथि हाम्रो भरोसा अझै बढ्छ; उहाँको व्यक्तित्वबारे अझ राम्ररी बुझ्न सक्छौं अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँ र हामीबीचको माया अझ गाढा हुन्छ। जीवन जिउने सर्वोत्तम मार्ग यही हो!”
तपाईं ईश्वरसित घनिष्ठ हुन चाहनुहुन्छ भने यहोवाका साक्षीहरू तपाईंलाई मदत गर्न खुसी हुनेछन्‌। तिनीहरूले तपाईंसित निश्शुल्क बाइबल अध्ययन गर्ने कार्यक्रमको प्रबन्ध मिलाउनेछन्‌। तिनीहरूको राज्यभवनमा हुने बाइबल आधारित सभाहरूमा उपस्थित हुन पनि तपाईंलाई निम्तो दिन्छौं। त्यहाँ तपाईंले ईश्वरसितको सम्बन्धलाई अत्यन्तै कदर गर्ने मानिसहरूसित सङ्गत गर्न पाउनुहुनेछ। * यसो गर्नुभयो भने तपाईंले पनि भजनको किताबका यी लेखकले जस्तै महसुस गर्नुहुनेछ, जसले लेखे: ‘ईश्वरको नजिक जान मेरो निम्ति असल छ।’—भजन ७३:२८.
^ अनु.9बाइबल अध्ययनको लागि अनुरोध गर्न अथवा तपाईंको घर नजिकै पर्ने राज्यभवनबारे थाह पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईंलाई यो पत्रिका दिने व्यक्तिसित सम्पर्क गर्नुहोस् वा हाम्रो वेबसाइट www.jw.org /ne को गृहपृष्ठको सबैभन्दा मुनितिर “हामीसित सम्पर्क राख्नुहोस्” भन्ने शीर्षकअन्तर्गत हेर्नुहोस्।